अप्रिल महिनाभर ग्रहचक्रमा हुँदैछन् पाँच परिवर्तन, ३ राशिलाई धेरै शुभ, ३ लाई अशुभ !
अप्रिल महिना शुरु भइसकेको छ। अन्य महिना झैं यस महिनामा ग्रहचक्रमा विभिन्न परिवर्तन हुनेछन्। महिनाभर हुने विभिन्न ग्रहको राशि परिवर्तनले हरेक राशिमा भिन्न-भिन्न प्रभाव पर्नेछ।
गत महिनाहरु भन्दा यस महिना अलि बढी नै विशेष रहनेछ । अप्रिल महिनामा पाँच ग्रहले राशि परिवर्तन गर्नेछन्। सूर्य, मंगल, बुध, वृहस्पति र शुक्र ग्रहको राशि परिवर्तनले हरेक राशिलाई भिन्न-भिन्न प्रभाव पार्नेछ । कुन ग्रहको राशि परिवर्तन कहिले छ ? हेर्नुहोस् केहि जानकारी
ग्रहचक्रमा महिनाभर केके परिवर्तन हुन्छन् ?
सूर्यको राशि परिवर्तन हरेक महिना हुने गर्छ। सूर्यको राशि परिवर्तनकै आधारमा हिन्दु महिना(वैशाख-चैत) निर्धारण हुने गर्छ। सूर्यले एक राशिबाट अर्को राशिमा प्रवेश गरेसँगै नयाँ महिना लागेको मान्ने चलन छ। सूर्यको राशि परिवर्तन अप्रिल महिनाको १४ तारिखमा परेको छ। त्यस दिनबाट मीन राशिबाट मेष राशिमा सूर्यको प्रवेश हुनेछ।
चन्द्र लगभग सवा दुई दिनमा राशि बदल्ने गर्छ। सबै ग्रहहरु भन्दा छिटो राशि परिवर्तन गर्ने हुँदा चन्द्रले राशिचक्रमा पार्ने प्रभाव पनि सवा दुई दिनमा परिवर्तन हुने गर्छ।
मंगल ऊर्जाको प्रतिक हो। मंगल जातकका व्यक्तिहरु धेरै नै जाँगरिला हुन्छन्। मंगल अप्रिल १४ बाट मिथुन राशिमा गोचर हुनेछ । यसको असर पनि सबै राशिमा फरक-फरक तरिकाले पर्नेछ।
कुण्डलीमा बुधको उपस्थितले मानिसहरुलाई विद्वान बनाउँछ। बुध अप्रिल १६ मा मेष राशिमा प्रवेश गर्ने छ थियो । बुधको उक्त राशि परिवर्तनको प्रभाव सबै राशिमा रहनेछ।।
जीवनमा सुख र समृद्धि शुक्रको शुभ प्रभावबाट मिल्ने गर्छ। शुक्र अप्रिल ९ बाट मेष राशिमा प्रवेश गर्नेछ । यस्तो हुँदा सबै राशिलाई फरक-फरक असर पर्न सक्छ।
अप्रिलमा शनिको कुनै पनि राशि परीवर्तन छैन । लगभग साढे दुई वर्षपछि जनवरीमा शनिले राशि परिवर्तन गरेक थियो। हाल शनि मकर राशिमा छ।
शुभफलहरू दिने ग्रह बृहस्पतिले अप्रिल ६ मा राशि परिवर्तन गर्नेछ। त्यसदिन पश्चात मकर राशिको यात्रा समाप्त हुन्छ कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्नेछ। यो ग्रहको शुभ प्रभावबाट नौकरी, वैवाहिक जीवनमा लाभ मिल्ने हुन्छ।
यी ग्रहचक्रमा हुने प्रतक्ष्य परिवर्तनको कारण राशिहरुलाई पर्ने समग्र असरको आधारमा महिना सबै भन्दा निम्न तीन राशि हुनेहरुलाई फाइदाजनक सावित हुन सक्छ।
मेष राशिका जातकका लागि यो महिना अघिल्लो महिनाको तुलनामा राम्रो रहनेछ। व्यापार राम्रो रहला। जागिरमा सहकर्मीको भरपूर साथ मिल्ला। परन्तु कृषि क्षेत्रमा सङ्कट आइपर्न सक्छ। आमाको स्वास्थ्यले पिरोल्नेछ। मामाहरुबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। सन्तान सुख मिल्नेछ। पुरानो साथीसँग भेटघाट होला।
मिथुन राशिका जातकका लागि यो महिना सुखमय रहनेछ। व्यापार ठीकठाक रहनेछ। कृषि क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। जागिरमा अधिकृतको सहयोग मिल्नेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला, सानोतिनो समस्या आउन सक्छ। पत्नीले सफलता हासिल गर्नेछिन्। कुनै टाढाको आफन्तसँग अचानक भेट हुनेछ, जुन लाभदायी साबित हुनेछ।
मकर राशिका जातकले यो महिनामा स्थान परिवर्तन गर्नेछन्। जागिरमा उन्नतिको योग छ। कृषि क्षेत्र मध्यम रहला। व्यापार राम्रो रहनेछ। जीवनसाथीबाट यो महिनामा केही विशेष लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। घरमा माङ्गलिक कार्य हुने योग छ। भूमि लाभ होला। उच्च पदाधिकारीबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ, परन्तु आफूलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ।
महिना कुन-कुन राशिलाई अशुभ ?
वृश्चिक राशिका लागि यो महिना अघिल्लो महिनाको तुलनामा राम्रो रहने छैन। कृषि क्षेत्रमा नाफा भईरहँदा एक्कासि घाटा ब्होर्नुपर्नेछ। जागिरमा साथीहरुसँग सम्बन्ध बिग्रिनेछ। बहिनीबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ। हजुरबाको जग्गा-जमिनको लाभ महिनाको अन्तमा पाउनुहुनेछ।
कन्या राशिका जातकले यो महिनामा जीवनसाथीको किचकिच सहनुपर्नेछ। जागिरमा तपाईको प्रस्तुति राम्रो रहला। कृषि क्षेत्रमा उन्नति होला। व्यापारमा साझेदारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। आमाबाट आर्थिक सहायत प्राप्त गर्नुहुनेछ। कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नुअघि सोचविचार गर्नुहोला, अन्यथा सङ्कट पर्नुहोला। कुनै नयाँ क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पाउनुहुनेछ।
वृष राशिका जातकका लागि यो महिना सङ्कटपूर्ण रहनेछ। पिताको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। महिला वर्गले पुरुष वर्गलाई समस्यामा पार्न सक्छन्, सावधानी अपनाउनुहोला। जागिरमा सानोतिनो झमेला आउनेछ। आफन्तजनसँगको सम्बन्धमा तीक्तता आउँला।
यस्तै बाँकि अन्य राशिका लागि भने महिना मध्यम रहनेछ ।